Bato reMDC T Rinodzinga VaMangoma neVamwe
Kubvumbi 10, 2014
VaElton Mangoma vadzingwa mubato reMDC vachipomerwa mhosva dzino sanganisira kuzvidza VaTsvangirai
WASHINGTON DC — Bato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai neChina rakatora danho rakaomarara rekudzinga nhengo ina dzinoti mutevedzeri wemubati wehomwe, VaElton Mangoma, munyori muboka revechidiki VaPromise Mkhwananzi, VaJacob Mafume pamwe naVaLast Maengahama. Vana ava vari kupomerwa mhosva dzinosanganisira yekuzvidza bato.
Mutauriri webato iri VaDouglas Mwonzora vakaudza vatori venhau kuti danho iri rakatorwa nekomiti huru yebato yeNational Executive Council mushure mekuona kuti varume vana ava vakaramba vachizvidza bato.
VaMangoma vakanga vambomiswa kushandira musangano vachipomerwa mhosva yekuzvidza VaTsvangirai, kusashandisa zvakatsarukana mari yebato nedzimwewo mhosva.
Asi VaMangoma, kuburikidza negweta ravo VaMafume avo vadzingwawo mubato iri, vakapikisa danho iri kuburikidza nekukwira kudare repamusoro reHigh Court, izvo zvazovasvitsa pakudzingwa kwavo.
VaMkhwananzi naVaMaengahama vanonzi vakadziyawo moto wembavha kuburikidza nekupinda kwavo mumusangano nevatori venhau vachishoropdza hutungamiri hwemusangano.
Munyori anoronga mabasa mubato iri VaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa nevarume vana ava rinoraitdza kuti vakanga vafunga zvavo kuti vambotura mafemo.
VaChamisa vanoti zvakaitwa nevamwe vevarume ava zvekuita musangano nevatori venhau chiratidzo chekuti vaironga kutora masimba zvechibhinya, izvo zvisingabvumidzi mumusangano.
Asi VaMkhwananzi vaudzawo Studio 7 kuti danho ratorwa nehutungamiri hweMDC iri harina zvarinoreva nekuti vamwe vevanhu vapinda mumusangano weNational Executive Council havasi nhengo dzekomiti iyi, izvo zviri kunze kwemutemo webato.
Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, VaMorris Ngwenya vati danho ratorwa neMDC T iri mucherechedzo wekuti bato iri haritevedzeri zvarino paridza zvehutongo hwejekerere.
VaNgwenya vati varume vana ava vadzingwa vasati vapiwa mukana wekuzvidzivirira pamashoko avanonzi vakataura kana zvinhu zvavanonzi vakaita.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revechidiki reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, VaSydney Chisi vati MDC T yaita zvino fanirwa kuitwa nebato ripi zvaro rine gwara uye rinoda kuti nhengo dzaro dzitevere zviga zvemusangano, kwete kusiya vanhu vachiita madiro ajojina.
Hurukuro naVaSydney Chisi Pamwe naVaMorris Ngwenya